Uqaliso-up uhlalutyo ukuseta irhasi ukuseta ukusilela
Ukusebenza kwesityalo, izixhobo zombane kunye neejenreyitha zizinto ezibalulekileyo zonxibelelwano, ezinokuthi zichaphazele ukubonelelwa kwamandla esityalo sombane ubukhulu becala. Ukuba umbane awonelanga, imveliso yemizi mveliso iya ...
Zeziphi izinto ezisetyenziswa ngabavelisi begesi
Zeziphi izinto ezisetyenziswa ngumvelisi wegesi? Umvelisi wegesi luhlobo lwezixhobo zokuvelisa umbane. Umgaqo-nkqubo wayo osebenzayo kukuba injini itshisa igesi, amandla obushushu aguqulwa abe ngamandla oomatshini, kwaye ujikelezo lwejeneretha luqhuba ukusika ...
Uyisebenzisa kanjani i-generator esetiweyo ngokuchanekileyo phantsi kobunzima
Ukusetyenziswa kweeseti zejenreyitha phantsi kweemeko ezibi zemo engqongileyo ikakhulu kungenxa yefuthe lezinto ezisingqongileyo. Amanyathelo athile kunye neendlela kufuneka zamkelwe kwiindawo eziphakamileyo zethafa eliphantsi naphantsi kwemozulu ebandayo. Oku kulandelayo ...